I-Free Banner Maker Ads Google | Umdali weBanner
Umdali weBanner: ads zakho ze-banner ngemizuzwana
Qalisa ngomumo asebenziseka amabhanela amaphakethe elungiselelwe imikhankaso yakho isibonisi okukodwa.
Zama Clever Izikhangiso Banner uMdali mahhala!
Khiqiza ngokuzenzakalela iphakethe lesibhengezo ngemizuzwana
Faka isizinda sakho ku-ithuluzi Banner uMdali futhi uthole izibhengezo zakho edalwe ngokuzenzakalelayo emizuzwaneni embalwa. Imibhalo, izithombe, kanye logo kuhlanganisiwe.
Noma khetha eyodwa yezifanekiso zethu ...
Futhi ngezifiso it kalula
Okhunye. Ganawap Kusukela kunoma iyiphi idivayisi
Zethu Banner uMdali kunjengasezinsukwini enamandla kumadivayisi eselula. Hlela izibhengezo zakho noma kuphi nanoma nini ufuna.
Zama Banner noMdali
Layisha amabhanela akho amasha kumikhankaso yakho yezikhangiso ze-Google ngokuchofoza okukodwa nje nge-Banner Creator yethu
Qala edonsa traffic kusayithi lakho nganoma isiphi isikhathi. Thepha inkinobho futhi ulayishe izibhengezo zakho amaphakethe ukuze imikhankaso Izikhangiso ze-Google lwakho olukhethile.
Zama Clever Izikhangiso Banner uMdali manje
Kuyinto ngokuphelele free. Dala amabhanela elungiselelwe imikhankaso yakho Izikhangiso ze-Google kweso.
Zama Banner uMdali!
Okuningi mayelana Clever Izikhangiso Banner noMdali
Funda kabanzi ukuqala kanjani ekwakheni Izikhangiso Google Display nge Clever Izikhangiso Banner uMdali futhi ukusebenza esitolo sakho inthanethi. imikhankaso Izikhangiso Okuhle-Google esingakulethela idatha enkulu futhi, ngaphezu kwakho konke, yokuthengisa ngaphezulu!
Banner uMdali izici, izinzuzo & izinzuzo
ukuqwashisa yokwakheka, ukukhiqiza umkhondo ezintsha, futhi idrayivu (futhi ukwanda) yokuthengisa nge Clever Izikhangiso Banner uMdali ... Zonke imahhala!
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukwakha amabhanela yakho ngesandla noma ukukhiqiza kubo ngokuzenzakalelayo, Clever Izikhangiso Banner uMdali lapha ukukusiza mahhala bese udala izinga banner iphakethe for kuwebhusayithi yakho noma ibhizinisi online. egcizelele ngokugcwele amabhanela for esitolo sakho inthanethi ukuthi uyokhulisa Khombisa imikhankaso yakho, imithetho ngokugcwele nezimfuneko ye-Google kanye ne ubuchwepheshe kaNdunakulu Google Partner ... Ngezinye zero izindleko!
Uma Khetha izikhangiso zokubhengeza Creation Manual ...
Ufuna ukulawula ukudalwa Bonisa izibhengezo yakho ye-Google futhi weqe umsebenzi onzima? Okufanele ukwenze ukulayisha izithombe zakho siqu nelogo, ukudala umbhalo wakho isikhangiso bese ukhetha ucingo esenzweni. Khona-ke ukushiya kithi! Uyoba bahlanganyele ekuthuthukiseni amabhanela futhi, ngesikhathi esifanayo, uyoba usizo lwethu zesakhiwo, ekwakheni futhi sizing kubo. Ngakho, amabhanela zakho usazoba ngokuphelele eyakho kodwa kancane usizo kakhulu isidina ingxenye, nokwenza kwabo futhi ukulayisha imikhankaso Izikhangiso ze-Google. Kulula kodwa essence yakho!
Uma Uncamela Banner Izikhangiso okuzenzakalelayo Generation ...
Uma, ngakolunye uhlangothi, ungenalo isikhathi ukudala amabhanela yakho ngesandla, masenze wonke umsebenzi ngawe. Ungakhathazeki mayelana imibhalo isikhangiso, kukhethwa izithombe, ukuklanywa amabhanela ... nokunye. Okufanele ukwenze nje ufake i-URL yakho iwebhusayithi futhi sizobe usethe amafa ephumelela kunazo ukwakha Bonisa izibhengezo yakho ye-Google. Kwakungeke kuvesane kube lula! Nge nje-URL ibhizinisi lakho ku-intanethi siqikelele wokwenza, ukumisa, iqhakambisa futhi, uma ufuna, futhi ukushicilela izibhengezo zakho.
Izici Key Niyothola ...
Indlela Thola Iningi iphume Clever Izikhangiso Banner noMdali?
Lonke Inqubo super lula, sathembisa. Okufanele ukwenze nje ukhethe ukudala izikhangiso zakho ngesandla noma ngokuzenzakalela, njengoba sishilo ngaphambili. Kuzo zombili lezi zimo AMP ne-HTML5 yakho amabhanela iyokwakhiwa ngokushesha bonke osayizi Kunconywa nempumelelo enkulu kuwebhu ngemikhankaso yakho Izikhangiso ze-Google ukuze uphumelele.
Ngale ndlela ungaqala traffic nezinguquko ibhizinisi lakho ngokusebenzisa amabhanela yakho entsha ngokushesha! Nge cishe akukho mzamo uzoba traffic futhi amakhasimende amasha engaba eza kuwebhusayithi yakho.
Clever Izikhangiso Banner uMdali kuzokuvumela ngokwezifiso konke kusukela imibhalo, izithombe ukuze imibala izikhangiso banner, noma kumodi ngokuzenzekelayo noma mathupha. Through yethu-HTML5 Banner uMdali uyohlale abe nezwi lokugcina mayelana nendlela ufuna banner izikhangiso zakho ukubukeka Yiqiniso, akukho lutho azolayishwa ngaphandle kokugunyazwa yakho ngaphambi.
Izikhangiso ze-Google izibhengezo Layisha Process
Khetha ukuthi izibhengezo zakho alayishwe imikhankaso Izikhangiso ze-Google futhi amaqembu ezikhangiso ozikhethele ngokuqondile futhi zizoqala ngokushesha uma imikhankaso ezikhethiwe asebenzayo. Kulula kunalokho!
Kodwa ungakhathazeki, uma ungafuni ukulayisha amabhanela yakho ukuze imikhankaso yakho, njengoba sishilo, kungcono akudingekile futhi ngeke kwenziwe ngaphandle kokugunyazwa yakho ngaphambi. Ungalanda futhi kubo ukuze ukwazi ulayishe kubo uwedwa ngenkathi wena endleleni noma kunini uma ufuna. Bobabili izinketho, ngakho ... Yini usalindeni ukuyizama?
Yini Esenza Sibe Different kusukela Abanye
Kungani Clever Izikhangiso Banner noMdali?
Clever Izikhangiso Banner uMdali kuzokusiza ukukhiqiza Izikhangiso ze-Google yakho Bonisa izibhengezo bese ulayishe ukuba akhawunti yakho mahhala. Yakho Khombisa imikhankaso kuyodingeka oguduka kakhulu amabhanela ezikhanga umkhakha yakho futhi uzobhekana kumqhudelwano nge imikhankaso ebeka zidonse ukunaka kwanoma abasebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, ukuba AMP (elakhelwe) ne-HTML5 amabhanela kusiza uthola CTR kangcono (Isilinganiso sokuchofoza) kanye nemiphumela jikelele. Ukuvumela ukuba uthole okuningi ibhajethi yakho Izikhangiso ze-Google kanye isikhathi sakho kanye nezinsiza.
Ukwakha zokudala nokwenza amabhanela kube kuhle imikhankaso Izikhangiso ze-Google kudinga isikhathi esiningi, izinsiza kanye namakhono. Clever zezikhangiso zikusiza londoloza amahora umsebenzi ebesingase sifakwe kuyi wachitha ngokubhala ikhophi isikhangiso, ukuklama nokwakha mockups futhi ekhuphuka nge zokudala. Gcina lezi zinsiza nesikhathi ukuthuthukiswa Khombisa zemikhankaso leli thuluzi futhi babe nazo ... Ngo ngokuchofoza! Isikhathi siyimali, stop zokuchitha kuyo inqubo yokudala amabhanela noma, uma ufuna ukugcina ukulawula kubo, khetha imanuwali ukwakhiwa kukho, njengoba ukhetha! Sifuna ukuba nesikhathi ukujabulela ikhofi yakho ekuseni ngaphandle begijima futhi ukucindezeleka, isikhathi nemali!
Zethu-Google Ad Automation Software has khona manjalo isikulungele ukuba umane kuhlole futhi uqale traffic kusayithi lakho. Ungalindi isikhathi eside futhi ukuyizama, kumahhala futhi kulula kakhulu, ngeke uzisole!
Gwema bekhanda ezingadingekile futhi okhathazeke
Bayakhohlwa kokuba yakho ye-Google Izikhangiso Banner sinqatshiwe! Clever Izikhangiso yenza isiqiniseko ulandela iziqondiso Izikhangiso ze-Google mayelana kokubili Izikhangiso Banner ukwakha futhi sizing. Njengoba singabantu-Google Premier-Partner sinesibonelo nompetha lwati lwetidzingo ye-Google uma udala nokulayisha google izikhangiso imikhankaso, kungakhathaliseki ukuthi ukusesha noma ukubonisa. Trust nathi futhi yonke imikhankaso wakho uyohamba kahle, sokuhambisana imihlahlandlela ye-Google.
Ungathembela kithi nganoma yini oyidingayo. Njengozakwethu weNdunankulu yakwaGoogle siyaqinisekisa ukuthi konke esikuthembisayo kuyalethwa Bangaphezu kuka-150,000 amabhizinisi asebenze nathi, futhi siqinisekisa imiphumela emihle kakhulu. Uma kukhona ukungabaza noma imibuzo ungangabazi ukuxhumana nathi. Ungasibhalela i-imeyili ku-hi @ cleverads .com noma usithumelele umyalezo nganoma iyiphi inethiwekhi yokuxhumana nabantu.
Izikhangiso ze-Google Bonisa Imikhankaso
Yiziphi Izikhangiso Google Display
Ukubonisa Ukukhangisa iyi-online zefomethi lapho izikhangiso ziboniswa ngendlela amabhanela on amakhasi okufikela. Ngesimo yabo kakhulu eziyisisekelo, lezi amabhanela kukhona inhlanganisela izithombe nombhalo. Bangaphinde zihlanganisa umsindo, ividiyo noma ezinye ifomethi interactive.
Lapho Izikhangiso Google Display Ingabe Kuboniswa
Izikhangiso zingavela ngenhla noma ngezansi imiphumela yosesho lwe-Google. Futhi, bangakwazi eceleni, ngenhla noma ngezansi imiphumela yokusesha ku-Google Play, ku-Shopping ithebhu futhi ku-Google Maps, kuhlanganise uhlelo lokusebenza Amamephu .... Ingabe uya lithuba?
Izinzuzo ze-Google Display
Ezinye Izinzuzo esemqoka we-Google Ads Bonisa inethiwekhi yilezi: kuba esilinganisekayo, it has ongakhetha enkulu izingxenye, kungazithinta yokubonakala, ivumela ukuba wenze ngendlela ofisa ngayo indlela yokukhokha, Kungcono kakhulu imikhankaso lokumaketha, kuba zesimo, ke inikeza ukusebenzisana okuhle ngeselula. Ungaphuthelwa ithuba ukuba yingxenye Izikhangiso ze-Google Display mahhala futhi kalula nge-Google Izikhangiso Banner uMdali wethu. Kuyinto ithuba eliyingqayizivele! Zama uMdali wethu Banner manje!
Sizokucela ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho Google Ads ukuze ukwazi ukulayisha kalula amabhanela owakhayo ku-akhawunti yakho Google Ads ngqo bese uqala ukuthola imiphumela ngokushesha. Sibheka ubumfihlo bedatha ngokungathi sína futhi siqoqa kuphela esikudingayo ukukunikeza ulwazi oluhle kakhulu.